Global Voices teny Malagasy » Gloval Voices: Tetezana mampifandray fomba fijery maro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jona 2019 17:45 GMT 1	 · Mpanoratra Mario Lopes Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Dika, Blaogim-Piarahamonina GV
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2015)
Nadikan'i Elisa Thiago  ho amin'ny teny Anglisy ity lahatsoratra ity. Afaka jerena eto ny lahatsoratra voalohany.
Saingy nahoana ireny tantara madinika nahafinaritra ireny no tsy maintsy nanjavona irery? Raha namaky gazety aho, zavatra roa no nihanazava tamiko: voalohany, izao tontolo izao sy sy tontolo manodidina ahy, afaka avondrona ho korontana lehibe ny zava-drehetra, fahoriana tsy manampaharoa, ary tsapako fa mety ho izaho no lasibatra manaraka (ilay “cultura do medo” [kolotsainan'ny tahotra] malaza ary matetika tononon'i Mia Couto) na, raha tsy izany, hoe mampitolagaga izao tontolo izao (kanefa, raha ny satako ara-tsosialy, tsy afaka nankafy ny hamaminy aho). Na izany aza, zazalahy miahiahy lalandava aho, mpanonofy; misy ireo milaza fa ny nofiko mpampaharary ahy, nefa raha ny hevitro, tsy misy hoipitaly afaka ny hitsabo aretina malefaka toy izany, ny hany “aretina” tokana mampijaly ahy, izay ahafahako miaina miaraka amin'ny fijery mamirapiratra isaky ny miposaka ny masoandro; avy eo aho manohy mamahana ny faniriako mba hahatanteraka ireo nofy rehetra .
Tsy dia tadidiko loatra ny daty tena nidirako tato amin'ny Global Voices fa mbola miaina ato anatiko ato izany fahatsapana faharavoravoana izany, toy ny hoe vao voalohany foana.
Niteraka fifangaroana fihetsehampo tato anatiko ny fidirana tato amin'ny Global Voices, tantara maro avy eny an-toerana izay afaka mampiely ny feony, fahanginana an-tery maro izay lasa hiakiaky ny rehetra, fa ahoana kosa ny momba ny fireneko? Tena vitsy kely ny tantara nikasika ilay nosy kely ivon'izao tontolo izao (São Tomé sy Príncipe) izay mila tsy ho fantatry ny olona, tsy fantatry ny olona ireo fandresena, faharesena, tantaram-pitiavana, nofin-jaza izay nanome elatra ny firindra nifampizaran'ny mpiray tanindrazana tamiko isaky ny mifoha izao tontolo izao.
Ka noho izany, nahetsiky ny finiavana hampahafantatra ireny tantara ireny, ireny hiaka mangina avy ao amin'ny fireneko ireny, voataona hanatevin-daharana ity fianakaviamben'ny Global Voices ity aho. Amiko, toy ny fomba fijery hafa manoloana ny zava-mitranga manerana ny tany ity fianakaviana ity, tetezana eo amin'ny zava-mitranga sy ireo olony, na tsotra izy ireo na tsia.
Raisiko ny dikan'ny Global Voices ary miresaka mikasika izany any anatin'ireo resaka tsy ofisialy sy fisehon-javatra maro aho rehefa misy manontany hoe inona izany. Manana fampitahana maro mikasika ny Global Voices sy ireo hetsika ataon'ny TEDx aho. Tahaka ny TEDx, ny Global Voices dia dingana iray hahazoan'ireo tantara lanja manokana mba hahitana ireo heverina toy ny “hafa” ho lasa “isika” any anatin'ny toe-javatra maro! Misy itovizana maro tokoa mantsy ny TEDx sy ny Global Voices, ary izany angamba no antony nahatonga ahy niditra haingana be tamin'ilay tetikasan'ny Gobal Voices, sady nandritra izany fotoana izany efa tanjon'ny zaza iray mpanonofy koa ny hahafahana mikarakara TEDxSãoTomé tamin'izany!
Ato amin'ny Global Voices, miaina ao anatin'ny hetaheta hampahafantatra an'izao tontolo izao ireo tantara nampanginina na noterena hangina isika. Resahantsika ny mikasika ireo antsipirihany tsy fantatry ny maro, ny mahasamihafa azy fotsiny (izay inoako) dia, any ambany, tsy milaza na inona na inona mihitsy isika, fa toy ny sehatra iray mahatonga ireo tena mitantara ny tantara ho mpandray anjara tena izy. Zazalahy sy zazavavy maro miahiahy lava isika, miezaka ny hanorina tontolon'ny fampahalalambaovao malalaka, izay tsy maintsy manerana izao tontolo izao ny fizaràna, tsy misy fanavahana. Arahabaina ry Global Voices, tohizantsika ny mikendry tontolo izay hiainan'ny tsikintsika, toy ny hoe velona ho an'ny fanahintsika ireo nofinofy!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/26/140698/
 eto : https://community.globalvoicesonline.org/2014/10/global-voices-a-ponte-de-multiplos-olhares/